It is me. Ko Niknayman.: သြစတြေလျနိုင်ငံတွင်လည်း လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြကြ။
သြစတြေလျနိုင်ငံတွင်လည်း မြို့ ကြီး (၄) မြို့ မှ မျိုးချစ်မြန်မာ (၂၀၀) ကျော်က ပြည်တွင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထုလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲများအား ထောက်ခံကြသည်။ နအဖနှင့် လက်ပါးစေများရဲ့အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်အား ရှုတ်ချပြစ်တင်ကြသည်။ထို့ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လောင်စာဆီနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ များအား အ ပြိုင်အဆိုင်ဝယ်ယူနေကြသော အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့ အား ကန့် ကွက်ရန်အတွက် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်သံရုံး များသို့ သွားရောက်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။မြန်မာပြည်အရေးကိစ္စအား ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဗီတို အာဏာသုံးကာ ပယ်ချခဲ့သော တရုတ်အားလည်း ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။
Posted by Ko Niknayman at 3:08 PM